တနင်္လာနေ့, ဧပြီ 13, 2015 စနေနေ့, ဇန်နဝါရီလ 14, 2017 တိုနီဘလဲ Symes
အနိုင်ရတဲ့ SEO မဟာဗျူဟာကိုတည်ဆောက်ရန်အခြေခံလိုအပ်ချက်တစ်ခုမှာသင်၏ Google အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုအဆင့်ကိုတိုးတက်စေခြင်းဖြစ်သည်။ Google သည်သူတို့၏ search engine algorithm ကိုအစဉ်မပြတ်တွန်းပို့နေသော်လည်းသင်တိုးတက်အောင်စတင်ရန်အခြေခံကျသောအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်အချို့ရှိသည်။ ၎င်းသည်စာမျက်နှာ ၁ ရှိရွှေထိပ်တန်းထိပ်သို့သင်ဝင်ရောက်လာနိုင်သည့်ဖောက်သည်များမြင်တွေ့ရမည့်အရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသေချာစေလိမ့်မည်။ Google search ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ။
သော့ချက်စာလုံးစာရင်းတစ်ခုသတ်မှတ်ပါ - လူများသည်သင်၏ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုမည်သို့ရှာဖွေမည်၊ စာရင်းပြုစုရန်စဉ်းစားပါ ဒီသော့ချက်စာလုံးများသက်တမ်းတစ်ခုစီအတွက်ခန့်မှန်းအသွားအလာကို Google's Keyword Planner ကဲ့သို့စစ်ဆေးပါ။ သင်၏စာရင်းကိုလူကုန်ကူးမှုအမြင့်ဆုံးနှင့်သက်ဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းများအထိလျှော့ချပါ။
ကောင်းသောအကြောင်းအရာထွက်အနိုင်ရပါလိမ့်မယ် - ထိုရေးသားခြင်းသည်ဆွဲဆောင်မှုရှိကြောင်းအမြဲသတိရပါ၊ အရည်အသွေးမြင့်အကြောင်းအရာ ၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားမှုကိုဆွဲဆောင်ပြီး visitors ည့်သည်များအား၎င်းကိုမျှဝေရန်နှင့်၎င်းအားပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရန်ဖိအားပေးသည်။ ကောင်းမွန်သောပါဝင်မှုသည်ဗိုင်းရပ်စ်ပါဝင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းရှိပြီး၊ ဂူဂဲလ်သည်အကြောင်းအရာဗိုင်းရပ်စ်ကို၎င်း၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အလဂိုရီသမ်တွင်အကြီးအကျယ်ဆုချသည်။
အုတ်မြစ်စာမျက်နှာများကိုဖန်တီးပါ - အကယ်၍ သင့်တွင်သော့ချက်စာလုံးများတူညီသောစာမျက်နှာ ၁၀ ခုရှိပါကမည်သည့်စာမျက်နှာနှင့်သက်ဆိုင်သည်ကို Google ဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ အဲဒီအစား, စဉ်းစားပါ သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာပေါင်းစည်း တစ်ခုတည်းသောအုတ်မြစ်စာမျက်နှာသို့။ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအပေါ်အခွင့်အာဏာရှိသည့်အုတ်မြစ်စာမျက်နှာတစ်ခုတွင် SEO ရှုပ်ထွေးမှုမရှိပါ။ သင်အဆင့်မြင့်ရမည်။
သော့ချက်စာလုံးများကိုအထပ်ထပ်သုံးခြင်းနှင့်စာမျက်နှာပါအကြောင်းအရာများကိုပြောင်းလဲခြင်း - သက်ဆိုင်ရာစာမျက်နှာအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးခြင်းသည်အဆင့်မြင့်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သော်လည်းအကြောင်းအရာဖန်တီးမှု၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းမှာသင်၏သော့ချက်စာလုံးများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ စာအရေးအသားကောင်းခြင်းအတွက်သော့ချက်စာလုံးများကိုဘယ်တော့မှမမကြာခဏထပ်ခါတလဲလဲမသုံးပါနှင့်၊ စာတိုများအတွက် ၂-၃ ကြိမ်နှင့်ပိုရှည်သောစာမျက်နှာများအတွက် 2-3 ကြိမ် ထပ်မံ၍ စာဖြင့်ရေးသားပါ။ အရေးကြီးသောသော့ချက်စာလုံးများကိုသင်၏ပထမဆုံးစာလုံး ၅၀ တွင်ထည့်ပါ။
သင်၏စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်များကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါ - The HTML tag သည်ဝဘ်စာမျက်နှာ၏ခေါင်းစဉ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးထိုစာမျက်နှာ၏အကြောင်းအရာအကျဉ်းချုပ်ကိုဖော်ပြရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဂူဂဲလ်က၎င်းသည်ဒုတိယ - အရေးအကြီးဆုံး SEO စာမျက်နှာတွင်ဖြစ်သည်။ သိမ်းထား စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်များ အက္ခရာ ၇၀ အောက်၊ ခေါင်းစဉ်မှာအရေးကြီးတဲ့သော့ချက်စာလုံးတွေ၊ သင်၏ကုမ္ပဏီ၏အမည်ကိုအဆုံးသို့ထည့်သွင်းရန်လည်းကောင်းသည်။
ဆွဲဆောင်မှုရှိသော meta ဖော်ပြချက်များကိုရေးပါ - The HTML tag သည်ဝဘ်စာမျက်နှာပါအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ကျသောရှင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအသုံးပြုသူများမှကလစ်နှိပ်ခြင်းတွင်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ သိမ်းထားပါ meta ဖော်ပြချက် ဇာတ်ကောင် ၁၅၀ အောက်။ အသုံးပြုသူ၏ရှာဖွေမှုနှင့်ကိုက်ညီသောမည်သည့်စကားလုံးမဆိုစာလုံးမည်းဖြင့်ပြလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်၏စာသားထဲတွင်ပစ်မှတ်သော့ချက်စာလုံးများပါ ၀ င်သင့်သည်။
internal link အတွက်ကျောက်ချစာသားအဖြစ် keyword variations ကိုသုံးပါ - ဖော်ပြရန်၊ သက်ဆိုင်ရာကျောက်ဆူးစာသားများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စာမျက်နှာနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်အကြောင်း Google ကို Google ဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီသည်။ ပြည်တွင်းဆက်သွယ်မှုကိုသင်အသုံးပြုသောအခါ၊ စာမျက်နှာများအတွက်ရည်မှန်းထားသောသော့ချက်စာလုံးများနှင့်မတူဘဲကျောက်ချစာသားကိုအသုံးပြုသင့်သည်။ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ or ဤနေရာတွင်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲ။ သို့သော်ကိုက်ညီသောသော့ချက်စာလုံးများသုံးခြင်းအားရှောင်ကြဉ်ပါ။ အနီးစပ်ဆုံးအပြောင်းအလဲများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သော့ချက်စာလုံးများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
ALT tags များကိုမမေ့ပါနှင့် - ALT tags များ HTML element များမှ၎င်းတို့အသုံးပြုသော element (ဥပမာပုံများ) ပြန်မပြသောအခါဖော်ပြရန်အခြားရွေးချယ်စရာစာသားများကိုသတ်မှတ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ALT tag များသည် Google SEO အဆင့်နှင့်အလွန်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများတွင်ရုပ်ပုံများနှင့်အခြားအရာများရှိပါကထိုစာမျက်နှာအတွက်သတ်မှတ်ထားသောသော့ချက်စာလုံးများနှင့်ဖော်ပြရန် ALT tag ကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုရန်သေချာသည်။
သင်၏ URL အမည်များသည်အရေးကြီးသည် ဂူဂဲလ်ရှာဖွေမှုအဆင့်တွင်ပိုတိုသော URL များသည်ပိုမိုရှည်လျားသော URL များထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်ဟုထင်ရသဖြင့်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုတည်ဆောက်သည့်အခါ၎င်းကိုသတိရပါ။ မျဉ်းစောင်းအနည်းဆုံးထားပါ။ သင်လည်းလုပ်သင့်သည် သင့်ရဲ့ URL အမည်များအတွက်သော့ချက်စာလုံးများပါဝင်သည်, သင်၏ဒိုမိန်းအမည်နီးကပ်သူတို့ကိုနေရာချဖို့ကြိုးစားပါ။ သင့် URL များ၌သော့ချက်စာလုံးများမြောက်မြားစွာရှိပါကတုံးတိုများဖြင့်ခွဲထားပါ။
အနက်ရောင် ဦး ထုပ်မရှိပါ - Black Hat SEO ဆိုသည်မှာ ရည်ညွှန်းကိုးကား ၀ ယ်ခြင်းကဲ့သို့သောသိက္ခာမဲ့သည့်နည်းပရိယာယ်များဖြင့်သင့်အားအဆင့်မြင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပေးသည့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကိုလှည့်စားရန်ကြိုးစားသည့်အလေ့အကျင့်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ သင်ဟာအနက်ရောင် ဦး ထုပ်နည်းဗျူဟာကြောင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုခေတ္တတိုးမြှင့်ခံစားရင်တောင်ခဏတာပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဂူဂဲလ်သည်ညစ်ပတ်သောလှည့်ကွက်များကိုရှာဖွေရာတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီးသင်လုပ်ခဲ့သောတိုးတက်မှုများကို algorithm update တစ်ခုဖြင့်ဖျက်ပစ်လိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ် ပို၍ ဆိုးသည်မှာသင်၏ site သည် index မှလုံး ၀ ဖယ်ရှားခံရလိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့ visitors ည့်သည်များနှင့်ဆောင်ခြေရာခံ - သင်၏ SEO ရလဒ်များကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုများ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အသွားအလာနှင့် ဦး ဆောင်မှု / အရောင်းထုတ်လုပ်မှုအပေါ်တိုင်းတာရန်အရေးကြီးသည်။ ဂူဂဲလ်ဝက်ဘ်မာစတာကိရိယာများကသင့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်မည်သို့လည်ပတ်နေသည်ကိုအရေးကြီးသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်သင်အမှားပြင်ဆင်သင့်သည့်အမှားများကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ An analytics ကဲ့သို့သော tool ကို Google ၏ Universal Analytics မှ ရှာဖွေမှုအသွားအလာပြောင်းလဲမှုကိုတိုင်းတာရန်နှင့် SEO ၏တိုက်ရိုက်ရလဒ်ဖြစ်သောသင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့် visitors ည့်သည်များ၏အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုခြေရာခံရန်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်သည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ကိရိယာများနှင့်ခေါ်ဆိုမှုခြေရာခံခြင်း tools များ (ကဲ့သို့။ ) DialogTech ၏ခေါ်ဆိုမှုခြေရာခံခြင်း) သင်သည် SEO နှင့်ပတ်သက်သော ဦး ဆောင်မှုနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုကူညီနိုင်သည်။
လူမှုရေးကိုရယူပါ - လူမှုရေးအချက်ပြမှုများ ဂူဂဲလ် SEO အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုသက်ရောက်မှုရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သည်။ သင်မရှိသေးပါက Google+ နှင့် Facebook ကဲ့သို့သောလူမှုမီဒီယာစာမျက်နှာများကိုတည်ဆောက်ပြီးသင်၏ပရိသတ်နှင့်စတင်ဆက်သွယ်ပါ။
link-building မဟာဗျူဟာရှိပါ - link ကိုအဆောက်အဦး သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုပြင်ပချိတ်ဆက်မှုအသစ်များဖန်တီးရန်အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လူအများမျှဝေလိုသည့်အလွန်ကောင်းသောအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးခြင်းအပြင် guest ည့်သည်ဘလော့ဂ်လုပ်ခြင်းနှင့်သင်၏စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောခွင့်ပြုထားသောဆိုဒ်များမှ ၀ က်ဘ်စီမံကွပ်ကဲသူများကိုသင်၏စာမျက်နှာများသို့ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရန်သည်လင့်ခ်များတည်ဆောက်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်သော့ချက်စာလုံးများကိုသုံးခြင်းသည်သင်၏လင့်များအတွက်ကျောက်ဆူးစာလုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏စာမျက်နှာများသည်ထိုဝေါဟာရများနှင့်သက်ဆိုင်ကြောင်းဂူဂဲလ်အားအချက်ပြရန်ကူညီလိမ့်မည်။
မိုဘိုင်းနှင့်အဆင်ပြေလွယ်ကူသောဆိုဒ်တစ်ခုတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ - Google ကကြေငြာခဲ့သည် မိုဘိုင်း - ဖော်ရွေအဆင့်သတ်မှတ်ချက် algorithm ကို ၎င်းသည်မိုဘိုင်းရှာဖွေမှုရလဒ်များအပေါ်သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။ ဂူဂဲလ်တွင်ပြုလုပ်သောရှာဖွေမှုအားလုံး၏ ၅၀% ခန့်သည်မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များပေါ်တွင်တွေ့မြင်ရသဖြင့်မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ရန်နှင့်သင်၏အဆင့်သည်ရလဒ်အနေဖြင့်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။
သင်၏အော်ဂဲနစ်ရှာဖွေမှုအဆင့်များနှင့်ဂူဂဲလ် SEO နှင့် PPC ရှာဖွေရေးကြော်ငြာ ROI တိုးတက်စေရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောလေ့ကျင့်မှုများပိုမိုလေ့လာရန်ဤ eBook သည်ကူညီနိုင်သည် ဂူဂဲလ် SEO နှင့် PPC အတွက်ခေါ်ယူခြင်းကိုရှာဖွေရန် Marketer ၏လမ်းညွှန်.
Tags: alt tag များwebsite ရဲ့ backlinkအနက်ရောင်ဦးထုပ်အကြောင်းအရာ seoအကြောင်းအရာကောင်းအဆင့်မြှင့်တင်seo တိုးတက်အောင်ပြည်တွင်းရေးဆက်သွယ်ရေးkeyword ကိုအထပ်ထပ်keyword ကိုသုတေသနပြုသော့ချက်စာလုံးအပြောင်းအလဲသော့ချက်စာလုံးတွေmeta ဖော်ပြချက်optimizationစာမျက်နှာခေါင်းစဉ် optimizationစာမျက်နှာခေါင်းစဉ်များseo အကြောင်းအရာလူမှုရေးနှင့် seourl ပတ်ကျိ
Blair Symes သည်ဝယ်လိုအားမျိုးဆက်မန်နေဂျာဖြစ်သည် ဒိုင်ယာလော့ခ်, ခေါ်ဆိုမှု analytics နှင့်အလိုအလျောက် software ကိုအတွက်ခေါင်းဆောင်။ လွန်ခဲ့သော ၁၇ နှစ်အတွင်းသူသည် B17B စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်နှင့်ရှာဖွေရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအပါအ ၀ င်ခေါင်းစဉ်များ၊ ဆောင်းပါးများ၊ အဖြူရောင်စာရွက်များ၊
၅ သင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသင့်သည့်အဓိက ၀ က်ဘ်ဆိုက်မက်ထရစ်အမျိုးအစားများ
ဧပြီ 14, 2015 မှာ 7: 16 AM
ငါ post ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မျှဝေမှုအတွက်အများကြီးကြိုက်တယ်
စက်တင်ဘာ 20, 2015 မှာ 1: 59 AM
စက်တင်ဘာ 20, 2015 မှာ 2: 30 AM
သင်၏စာရင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ "Create cornerstone pages" item သည် metas တွင် "canonical" keyword စသည်တို့ကိုပေါင်းထည့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သလား။
20:2015 pm တွင်စက်တင်ဘာ 9, 45 မှာ
Canonical URLs သည်သင်၊ ဆိုဒ်များ၊ ဒိုမိန်းများသို့မဟုတ်ဒိုမိန်းများတွင် ၁၀၀% သောအကြောင်းအရာများကိုထပ်ခါတလဲလဲကူးယူထားသည့်နေရာဖြစ်သည်။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်၎င်းတို့အားလုံးအကြားအာဏာခွဲဝေပေးမည့်အစားစာမျက်နှာတစ်ခုပေါ်တွင်အာရုံစိုက်စေလိုသည်။ အုတ်မြစ်စာမျက်နှာများသည်ခေါင်းစဉ်စာမျက်နှာများဖြစ်သည်။ ပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာများနဲ့စာမျက်နှာများကြားမှာသင်၏အခွင့်အာဏာကိုခွဲမထားဖို့သေချာစေချင်တယ်။ မတူညီသောစကားလုံးများနှင့်ရှင်းလင်းချက်များရှိသောစာမျက်နှာများစွာထက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအတွက်အလွန်ပြည့်စုံသောစာမျက်နှာများရှိခြင်းကပိုကောင်းသည်။ သင်၏ဆိုဒ်အတွက်အဆင့်ဆင့်ဒီဇိုင်းဆွဲပြီးထိုအဆင့်တွင်သင်လိုချင်သည့်သော့ချက်စာမျက်နှာများကိုဆုံးဖြတ်ပါ။ ထို့နောက်ထိုအုတ်မြစ်စာမျက်နှာများကိုတည်ဆောက်ပါ။
ဇန်နဝါရီ 22, 2016 မှာ 3: 33 AM
Organic search perfomance အကြောင်းကောင်းတဲ့အချက်အလက်တွေဝေမျှပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Adil Shah က
မတ်လ 1, 2016 မှာ 5: 17 AM
မတ်လ 11, 2016 မှာ 2: 14 AM
မတ်လ 29, 2016 မှာ 10: 34 AM
ကောင်းတဲ့ပို့စ်! သင်၏ SEO ကိုစံသတ်မှတ်ထားသော SEO SEO လမ်းညွှန်များမှပိုကောင်းအောင်လုပ်ခြင်းနှင့်သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံ / မိုဘိုင်းနှစ်သက်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကိုပိုမိုအာရုံစိုက်ခြင်းက၎င်းကိုကြီးမားစေသည်ကိုငါသတိပြုမိသည်။ သတိပြုရကျိုးနပ်နောက်ထပ်အရာမြန်နှုန်းပါ! ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝများကိုအမြန်လမ်းတွင်ယခုတစ်ရက်သာနေထိုင်ကြသည်၊ ထို့ကြောင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို“ Timmy နည်းနည်းစောင့်ဆိုင်းမနေပါနှင့်” အဖြစ်ယူနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများကိုလျင်မြန်စွာဖမ်းရန်အကြောင်းအရာများကိုအကောင်းဆုံးရယူပါ။
ဧပြီ 14, 2016 မှာ 6: 53 AM
heloo ဤ blog သည်ကြီးစွာသော knoledge ဖြစ်ပါတယ်
ဧပြီ 30, 2016 မှာ 6: 10 AM
ကောင်းတဲ့ဘလော့ဂ် ငါကြိုးစားပြီး၊ ငါ့ဆိုဒ်သည် Google ၏ပထမစာမျက်နှာတွင်ရှိသည်။ ငါတို့နှင့်အတူမျှဝေသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မေလ 6, 2016 မှာ 8: 07 AM
အကြံဥာဏ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုပုံမှန်ပုံမှန်စတင်မည်။ အတိုချုပ်ရိုးရှင်း။ ကြည်လင်ပြတ်သားသောသတင်းအချက်အလက် ... အေးမြ! SEO လုပ်ငန်းများကိုတိုင်းတာခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသောအရာများဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ၎င်းသည်သင့်အားမှန်ကန်သောလမ်းကိုပြသသည်။ ဒါဟာငါတို့အားလုံးလုပ်နေတာပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဒီဇိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်၏စုစုပေါင်း SEO ပြင်ဆင်ခြင်း
ဤအချက်အလက်သည်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်၏ SEO တိုးတက်စေရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ ရိုးရှင်းသောနှင့်အချက်ရန်။ SEO = အရည်အသွေး၊ အပြိုင်အဆိုင် & လက်တွေ့ကျသော KW (သို့) သော့ချက်စကားစုများ၊ သင်၏အချိတ်အဆက်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်နှင့် spam များကိုရှောင်ရန် - ကောင်းသောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရရှိရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ပါ ၀ င်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလတ်ဆတ်နေအောင်ထားခြင်းကတကယ်ကိုအရေးကြီးတယ် သတ်သတ်မှတ်မှတ်စာမျက်နှာများနှင့်ဆောင်းပါးများအတွက်အဝင် link များကိုရယူရန်သတိရခြင်းသည်အမှန်ပင်အကူအညီဖြစ်စေနိုင်သည်။
SEO ဆိုသည်မှာရလဒ်များကိုမောင်းနှင်ရုံသာမကအခြားအွန်လိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးပုံစံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအမြင့်ဆုံးပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းရှိကြောင်းကျွန်ုပ်အတွက်ရှင်းလင်းစွာနားလည်သည်။ ဆောင်းပါးကောင်းတွေကိုသိမ်းထားပါ၊ 🙂
မေလ 17, 2016 မှာ 9: 09 pm တွင်
မေလ 27, 2016 မှာ 5: 16 AM
14:2016 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 12
ဂရိတ် post ။ အလွန်အသုံးဝင်သောအကြံပေးချက်များ။
28:2016 pm တွင်ဇူလိုင်လ 4, 57
21:2016 pm တွင်စက်တင်ဘာ 4, 58 မှာ
25:2016 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 7, 02
ဤသည်တကယ်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်အများကြီးနှင့်အတူအလွန်ကြီးစွာသောဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ ကျွန်ုပ်သည်သော့ချက်စာလုံးများနှင့် meta ဖော်ပြချက်များ၏စွမ်းအား၌ကျွန်ုပ်၏ဗဟုသုတမရှိခြင်းကိုယခုသတိပြုမိသည်။ တနည်းအားဖြင့်ငါဒီတိုးတက်အောင်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
18:2016 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 7, 48 တွင်
အကယ်၍ သင်သည်မှန်ကန်သောအစီအမံများမရှိဘဲထုတ်ဝေလျှင်အကြောင်းအရာများသည်သင့်အသွားအလာအားလုံးကိုသယ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။ သင့်ရဲ့အကြောင်းအရာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
3:2017 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 1, 16
ဧပြီ 16, 2017 မှာ 4: 55 AM
၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်အော်ဂဲနစ်အသွားအလာတိုးမြှင့်နည်း။ ကျွန်ုပ်သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိအသွားအလာတိုးပွားစေရန်အရာအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်ပြီးပါပြီ။ ကျွန်ုပ်မှာရလဒ်မရှိပါ။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အော်ဂဲနစ်အသွားအလာတိုးမြှင့်ဖို့အမှန်တကယ်နည်းဗျူဟာကဘာလဲ
ဧပြီ 16, 2017 မှာ 11: 21 pm တွင်
သင်၏ဆိုဒ်သည်အော်ဂဲနစ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုစတင်သည် SEMRush အရသိရသည်, ဒါပေမယ့်သင်ကရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ထဲမှာတော်တော်လေးနက်ရှိုင်းစွာသင်္ဂြိုဟ်ထားသည် WordPress လို CMS ကိုပြောင်းပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုအင်စတီကျူးရှင်းတွေပေါ်မှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်။ သင်၏ဒေသတွင်း၌သင်၏ရေးသားသူဇီဝဗေဒနှင့်သင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုချိတ်ဆက်နိုင်သည့် posts ည့်သည်စာမူအချို့ကိုသင်ရနိုင်ပါကသင်၏ရှာဖွေရေးအာဏာကိုအရှိန်မြှင့်နိုင်သည်။
မေလ 15, 2017 မှာ 6: 59 AM
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Mr. Douglas Karr.
ဧပြီ 17, 2017 မှာ 11: 11 AM
သင်၏အကြံပေးချက်များသည်ကျွန်ုပ်အတွက်တကယ်အထောက်အကူဖြစ်သည်။ ပါဝင်သည့် SEO အခြေခံသည်ယနေ့ခေတ်တွင်များစွာအကျိုးရှိသည်။ ငါတို့သည်လည်း SEO ပြုနေကြသည်နှင့်သင်၏အကြံပေးချက်များငါ့အလုပ်အတွက်ပိုမိုတန်ဖိုးထားတတ်၏။
13:2017 pm မှာဇွန် 5, 13
သြဂုတ် 1, 2017 မှာ 10: 40 AM
ဒီမှာကြီးစွာသောသတင်းအချက်အလက်တစ်ခုလုံးတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်။ သင်နှင့်အခြားဝေဖန်သုံးသပ်သူများကအရာရာတိုင်းကိုဖုံးလွှမ်းသွားနိုင်သည်။ စာဖတ်သူများသည်သုံးစွဲသူများ၏မက်ထရစ်များသည်စာမျက်နှာ / entity တစ်ခုချင်းစီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များပြီးမြောက်ပါကဂူဂဲလ်ကိုနားလည်ရန်ကူညီရာတွင်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။ ၎င်းတွင်သင်အကြိုက်ဆုံး Analytics ပလက်ဖောင်းကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာတစ်ခုစီတွင်မည်သည့်စေ့စပ်သုံးစွဲသူများပါဝင်သည်ကိုနားလည်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ဤအရာကိုနားလည်ခြင်းသည်အသုံးပြုသူများသည်သင်၏အလွန်ကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာများ၊
29:2017 pm မှာအောက်တိုဘာ 9, 31
ဟုတ်ကဲ့၊ မိုဘိုင်းဖော်ရွေသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်၊ meta ခေါင်းစဉ်၊ meta ဖော်ပြချက်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်ရရှိရန်အတွက်ပုံရိပ်ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာကိုအသုံးပြုခြင်း၊ ဆိုက်တင်ပို့မှုအချိန်တိုးမြှင့်ခြင်းတို့သည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဤအရေးကြီးသောအကြံပြုချက်များကိုမျှဝေပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မင်းရဲ့ပို့စ်ကနေနည်းစနစ်အသစ်တွေငါနည်းနည်းသင်ယူခဲ့တယ်။